Lohalaharana amin’izany ireo tsy manan-trano izay nomarihin’ity filohany ity fa anisan’ny vesatra tena mampahantra ny mpiarabelona ankehitriny. Olona roa tena sahirana ara-pivelomana no nananganan’izy ireo trano teny Betsizaraina Ambohimangakely ny sabotsy lasa teo. Raim-pianakaviana iray, mpitarika ireo mponina monina eny La Réunion kely ny iray izay mipetraka amin’ny trano plastika raha mpatory eny ambany tetezan’i Behoririka kosa ny iray. Mpikambana an-jatony no tonga nirodorodo nanome tanana ny asa fananganana ny tranon’izy ireo tamin’io andro io izay samy manana tanjona hanampy ireo tena sahirana ao anatin’ny fikambanana aloha, tsy hiandrasana tambiny. Tsy tanim-panjakana ity nananganan’ny FILEFA trano ho an’ireo mpikambana ao aminy ity fa tanin’ny filoha nasionalin’ny fikambanana. Miantso ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky izao asa soa sahaniny izao ny filohan’ny FILEFA hahafahana manamaivana ny fahasahiranan’ny mpiarabelona. Tsiahivina fa miisa 60 000 ankehitriny ireo mpikambana izay marihina fa samy manana ny faripiainany.